Fipariahan’ny basy entin-jiolahy Andosiran’ny mpizahan-tany Toamasina
Araka ny resaka nifanaovana tamin’ny tompona trano fandraisam-bahiny avy any Toamasina, mihena isan-taona ny mpiala sasatra any an-toerana noho ny fihanaky ny tsy fandriam-pahalemana.
Tamin’ity fetin’ny krismasy sy taom-baovao ity dia ireo zana-tany ihany no ankamaroan’ny mpandeha taksibrosy nidina tany an-toerana. Faritra mena tanteraka noho ny asan-jiolahy Toamasina, noho ny fanafihana mitam-piadiana. Na ny mponina ao amin’ny renivohitry ny Faritra antsinanana aza mikolay noho ny fipariahan’ny fitaovam-piadiana mahery vaika any an-toerana. Ireo fanafihana rehetra dia saika tanterahin’ny malaso amin’ny basy mahery vaika. Ankoatra ilay zandary voatifitry ny jiolahy, ny 30 desambra teo ihany koa nisy tokantrano iray teo Tanambao Verrerie, notafihin’ny tsy valahara roa mirongo basy, izay andro atoandro be nanahary tamin’ny 10 ora. Ny 3 janoary teo ihany koa, lohana teratany karana zokiolona iray no voavelin’ireo tsy mataho-tody tamina vody basy. Ankoatra ny herisetra, norobain’ireo olon-dratsy mitam-piadiana ny finday sy ny vola matin’ity mpivaro-damba teo Anjoma ity izay mananika ny 8 hetsy ariary. Maro amin’ireo tanana any an-toerana no tsy mety andehanan’ny posy sy fiara karetsaka noho ny tsy fandriampahalemana. Ny mpiavy no tena hazain’ireo mpanao sintomahery, indrindra vao mibaby sakaosy. Miandrandra paik’ady hentitra ho an’Antananarivo sy Toamasina ny olom-pirenena fa mihanaka izay tsy izy ny asan-jiolahy.
Andosiran’ny mpizahan-tany noho ny fanafihana mitam-piadiana i Toamasina (Sary fanehoana)